Posted By: KongoLisolowaa: Diisambar 1, 2018 00: 20 No Comments
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay u tagtay inay dharkeeda ku maydho webiga agtiisa, nasiib darro afartii nin ayaa fiirinayay iyada, si lama filaan ah yaxaas ayaa qaniinay oo ku jiiday biyaha.
1. Fanaanku wuxuu sameeyaa hees aad uqurux badan, yaxaaska ayaa madaxa kor uga qaaday biyaha si uu udhageysto heesta.
2. Ugaarsigii ayaa rasaastii furay, wuuna dhintay. Gabadhu waxay dul sabaynaysay biyaha.
3. Kalluumeysatada ayaa quusay oo xeebta keenay ka dib.
4. Dhakhtarku wuu daweeyey iyaduna way fiicnayd markale
Haddaba yaa u qalma inuu guursado gabadhan yar ee ka mid ah afartaan nin maxaase ugu wacan? ... Keybelayaashaada!
Nov29 09: 23